कति समय सम्म सेक्स गर्नु राम्रो हुन्छ ?::न्युज बिहानी
कति समय सम्म सेक्स गर्नु राम्रो हुन्छ ?
मानीसहरुलाई सबैलाई कतिबेला सम्म सेक्स गर्नु उचित हुन्छ भन्ने चासो हुन्छ । सबैले आफ्नो यौन जीवनलाई शुखमय बनाउन चाहन्छन् । सबैले जान्न चाहान्छन कति समय सेक्स गर्नु राम्रो हुन्छ । यो मामलामा पुरुषहरु प्राय खुलेर बताउने गर्छन् । भर्खरै क्यानडा र अमेरिक्यान सेक्स थेरपिस्टहरुले गरेको खोजी गेका छन् । जसमा उनीहरुले सामान्य र असामान्यसट्टा केन्द्रित राखे ।
यो अध्यायनको नतिजा अनुसार यदि १ वा २ मिनेटमै सेक्स सकिन्छ भने यसलाई धेरै कम मानिन्छ । यदि ३ देखी ७ मिनेट सम्म सेक्स गर्यो भने यो पर्याप्त हुन्छ । सबै भन्दा धेरै राम्रो ७ मिनेट देखी १३ मिनेट सम्मको मानिन्छ । यदि कुनै जोडिले आधा घण्टा सम्म सेक्स गर्छन भने यो जरुरी भन्दा धेरै हो ।
एक विशेषज्ञका अनुसार सेक्स गर्दा पुरुष साथिले आफ्नो साथी संग धेरै विचारहरुको आशा राख्छन् । यस्ता आशाहरु टीवी, फिल्म र यौन विडियो बाट मनमा आउछन् । जबकि सेक्स भिडियोहरु धेरै नाटकीय रुपमा निर्माण गरिएका हुन्छन् । यसलाई हेरेर मनमा कुनैपनि आशा राख्नु हुदैन । वातविकता र सेक्स भिडियो विच कुनै तुलना हुन सक्दैन ।
एक मोडलका अनुसरा सेक्स तब सम्म गर्नुपर्छ जब सम्म दुबैको ईच्छा पुरा हुदैन । एक साईकलिस्टका अनुसार यदि हामीले त्यो समयमा सेक्सको बारेमा सोच्न थाल्यौ भने हामीले मनोरंजन लिन सक्दैनौ ।
क्हिले काहि दुई साथीविच फरक फरक ईच्छाका कारण सेक्स गर्दा खासै मजा नआउने हुन्छ । कहिलेकाहि महिला सेक्स छिटो सेक्स खतम गर्न चाहन्छिन। जबकि उसको केटा साथी लामो समय सम्म सेक्स गर्न चाहन्छ । कहिले पुरुष छिटो सेक्स खतम गर्न चाहन्छ् ।
आज – ०३ माघ २०७५ बिहिवारको राशिफल